Munaasabada Dhulka ee Sinocare iPOCT Mashruuca Beerta Warshadaha-News-Sinocare
Munaasabada Dhulka ee Sinocare iPOCT Mashruuca Beerta Warshadaha
Waqtiga: 2021-02-22 Hits: 87
Bishii Janaayo 2021, xafladii dhagax dhigga ee aasaaska salka ee mashruuca Sinocare iPOCT Industrial Park ayaa lagu qabtay goobta mashruuca. Mashruucu waa xadiiqad warshad gaar ah oo loo yaqaan 'iPOCT park' oo ay dhistay shirkadda Sinocare iyada oo maalgelintiisu tahay RMB 1 billion. Waxaa loo qorsheeyay in loo qeybiyo seddex qaybood, oo kala ah saldhigga wax soo saarka iCARE, saldhigga wax soo saarka AGEscan iyo saldhigga wax soo saarka CGM. Dhamaadka mashruuca, waxay xaqiijin doontaa wax soosaarka ballaaran ee iCARE iyo iCGMS, badeecooyinka cusub ee ay soo saartay shirkadda Sinocare ee adduunka oo dhan, waxayna siisaa xalal aad u ballaaran oo loogu talagalay ka hortagga iyo daaweynta cudurrada daba dheeraada.
Laga soo bilaabo 2016, Sinocare waxay soo bandhigtay qaab ganacsi oo caalami ah, waxay kaqeyb qaadatay helitaanka Trividia Health Inc iyo PTS ee Mareykanka, waxayna si firfircoon u balaarisay ganacsiga tijaabinta POCT sida dufanka dhiigga iyo glycosylated hemoglobin. Iyada oo loo marayo hal-abuurnimada iskaashi ee cilmi-baarista iyo horumarinta gudaha iyo dibedda, iyo is-dhexgalka shabakadaha suuq-geynta caalamiga ah, waxay gashay xerada hoggaamineysa shirkadaha mitirka gulukoosta dhiigga adduunka.
Mashruuca Sinocare iPOCT Industrial Park ee dhawaan la bilaabay ayaa lagu dhisi doonaa seddex waji, iyadoo lagu qiyaasayo dhismaha dhismihiisa shan sano. Kadib marka la dhammeeyo, waxaa la qiyaasayaa in qiimaha wax soo saarka sanadlaha ah uu gaari doono 3 bilyan, tabarucaada canshuurta ayaa kordhin doonta in ka badan 200 milyan, ku dhowaad 2,000 oo shaqo ayaa la abuuri doonaa. In kasta oo gacan laga geysanayo kor u qaadista xoogga Sinocare, waxay sidoo kale ku dhiirrigelineysaa kobaca biomedicine iyo silsiladda warshadaha caafimaadka ee Changsha High-tech Zone.
Bogga Hore: Shaybaarka Jaangoynta iPOCT
Bogga Dambe: ISTICMAALKA ISTICMAALKA FAYras IgM-IgG TIJAABADA XANUUNKA